Okwu a bụ "Split View" ga-akpọrọ Apple n'ụlọ ikpe kachasị elu na India | Esi m mac
Okwu a bụ “Split View” ga-ewetara Apple ụlọ ikpe kacha elu na India
Ma iOS 9 na OS X El Capitan ewebatala ụdị ọrụ ntanetị dị iche iche na iPads dakọtara na Macs, gụnyere atụmatụ ihuenyo ekewara akpọ Split View. Thelọikpe Kasị Elu nke Delhi na-enyocha okwu ahụ ugbu a, nke chọrọ Apple ka ọ kwụsị iji na sọftụwia na okwu ahụ na India, ma ọ bụghị na-eweta echiche nke ụghalaahia edenyere site patent.
Ọ bụ ụlọ ọrụ a na-akpọ Vyooh gbara akwụkwọ ikpe maka mmebi iwu a. onye na-ere Microsoft, nke nwere ụghalaahịa n'okpuru aha 'SplitView' dị ka akwụkwọ akụkọ Indian Times si kọọ. Ka anyị ghara ichefu na nso nso Apple nwekwara a na-agba ọsọ na-na ikpe ziri ezi n'ihi na nsogbu na ire ere ndozi ndozi.
Dị ka anyị nwere ike ịgụ na Oge Indian:
Courtlọikpe Kasị Elu nke Delhi agwala nnukwu ụlọ ọrụ America nke Apple ka ọ ghara iji aha 'SplitView' na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla, dị ka iPad, iPhone ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ iOS mgbe ụlọ ọrụ ngwanrọ nwere na Delhi na-amaghị ama aha ya bụ Vyooh iji nyefee ụlọ ikpe ya n'ụlọ ikpe kachasị elu, na-ebo ebubo mmebi iwu ụghalaahịa This
Nke a abụghị oge mbụ Apple nwetara nsogbu na okwu Split View, kemgbe ọnwa Machị Onye oru software nke India Rohit Singh, Ọ gbara ụlọ ọrụ Cupertino akwụkwọ n'ihu ụlọ ikpe dị elu nke Delhi maka iweghara akara ụghalaahịa 'SplitView'. O doro anya na ụfọdụ n'ime unu echewo banyere ya na nke ahụ bụ n'ihi Singh bụ n'ezie nwa okorobịa na-agba ọsọ Vyooh na onye nwere ngwa akpọrọ SplitView, DiskView na ViewScribe.
Vyooh si SplitView ngwa ụbọchị si gburugburu 2006. Nke a software na-enye ohere ka ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'otu oge na otutu windo na otu ihuenyo. Ugbu a Apple nwere ruo May 9 iji gosipụta ikpe ya megide mkpebi a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Okwu a bụ “Split View” ga-ewetara Apple ụlọ ikpe kacha elu na India
Ọfịs nweere onwe ya na 9,7 "iPad Pro ọhụrụ
Kobe Bryant na kpakpando ohuru nke Apple TV